Unreleased Albums | Myanmar Mp3 Album
Tag Archives: Unreleased Albums မှားခဲ့ပြီ_ Lubble Grinzy Song name-မှားခဲ့ပြီ there you go new song….I made this track like….umm..ages ago maybe xD…very very long…But I’ve come to noticed that I haven’t yet posted online lay….so plz..listen kyi kya bar own….madame et monsieur =D Mediafire Download Hulkshare download Lubble Grinzy Fan Page
တွယ်တာမှု တေးရေး တေးဆို ။ ။ ဟန်ဖြိုး+ရဲထူး+ရဲထက် နင့်အတွက်ငါ့မှာ အသက်ရှင်ပါလျက်နဲ့ အသက်သေသွားခဲ့ပါပြီ။ နင်အသုံးချဖို့ ငါ့နှလုံးသားကိုယူပါကွယ်။ နင်ကြိုက်သလိုသုံး ငါက အဖြည့်ခံပါပဲ။ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒေါင်းရတာ တန်မယ့်သီချင်းလေးပါ။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်———– တွယ်တာမှု
August 19, 2011 waiyan112 Unreleased Albums
ဟေမို (ထင်ချင်သလိုထင်) ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းများ ဟေမိုရဲ့ ” ထင်ချင်သလိုထင်” ထဲက သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေပါနားထောင်ပြီးအားပေးကြပါအုံးနော် သူ့ဆီကိုဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ [email protected] 1.နည်းနည်းလျော့[ Download ] 2.ကြယ်ကလေး [ Download ] 3.ပေါက်စလေး [ Download ] 4.အဝေးကကြည့်နေယုံ [ Download ] 5.ဘယ်လိုအချစ်မျိုးနဲ့ [ Download ] 6.အဖြေတစ် [ Download ] ﻿
June 2, 2011 tharpauk ၀ါသနာရှင် အခွေများ
Zion (ဇိုင်းယန်း) Zion ရဲ့ အသစ်ထွက်မဲ့ တစ်ကိုယ်တော် Album ထဲက simple songs လေးတွေနားထောင်ပြီးအားပေးကြပါအုံးနော်….. သူ့ဆီဆက်သွယ်ပြီးအကြံပေးချင်ရင်တော့ [email protected] ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
May 26, 2011 tharpauk Media
ဟေမို (ထင်ချင်သလိုထင်) ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းများ ဟေမို ရဲ့ ထင်ချင်သလိုထင်ထဲ က သီချင်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ ပါ နားထောင်ပြီး အားပေးကြပါအုံးနော်…. ဆက်သွယ်ရန် သူ့လိပ်စာက တော့ [email protected] 1.အဖြေတစ်(http://hulkshare.com/umdz78vvqa8c) 2.အဝေးကကြည့်နေယုံ(http://hulkshare.com/mv1bju7r8b1u) 3.နည်းနည်းရှော(http://hulkshare.com/dskbl1arer31)့ 4.ကြယ်ကလေး 5.ပေါက်စလေး 6.ဘယ်လိုအချစ်မျိုးနဲ့(http://hulkshare.com/duatrnazjlo2)
May 24, 2011 tharpauk Media
အရင်လို(သားသား) Download Link http://hulkshare.com/alhikgbrhhkf
May 6, 2011 tharpauk အဆိုတော် (ကျား)
သားသား (အရင်လို) Download Link http://hulkshare.com/alhikgbrhhkf
March 18, 2011 tharpauk ၀ါသနာရှင် အခွေများ
Aung La ရဲ့ Demo song လေးတပုဒ်ပါ.. Aung La ရဲ့ Demo song လေးတပုဒ်ပါ.. ကျွန်တော်လဲသူငယ်ချင်းတယောက်ဆီကရတာ.. ဘယ်စီးရီးထဲမှာပါမလဲတော့မသိဘူး.. တော်တော်မိုက်တယ်.. Hnote Sat Tal
January 31, 2011 alexander Media
Double Y Double Y ရဲ့ မထွက်ရသေးတဲ့ သီချင်းတွေ ပါ… နားထောင်လို့ ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် To Download Double Y
December 20, 2009 linlin2010 Media
Suicidal Kid – Sample ( 2009 ) Intro ( Suicidal Kid ) Love = Suicide Dark Night Don’t Care Dream Media Fire Download http://www.mediafire.com/download.php?myjy5gz1wuz Suicidal kid is one of the MM underground band. All the songs are written by Suicidal Kid, except in Dream ( Suicidal kid + WKM ).
May 29, 2009 WKM Unreleased Albums